ikhaya » Okufumaneka » Amanqanaba aphezulu e-5 yokuPhumelela ngokuPhumelela: Ukuphumelela ekudalweni kwiSasazo
Amanqanaba aphezulu e-5 yokuPhumelela ngokuPhumelela: Ukuphumelela ekudalweni kwiSasazo
Uhanjiswe kwi-BroadcastAsia Special Edition
NguCameron Jahn, i-CMO, i-AmpLive
Phakamisa isicwangciso sakho sevidiyo esiphila ngokucwangcisa ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni
Ukuphumelela ngokuphumelela kwamathumba ukuya kwiimpawu ze-2: yenza umxholo onyanzelisayo kwaye uqinisekise ukuba abantu bayakubona.
Abadali bokuqukethwe banokuqinisekisa ukuba baphumelela ukuphumelela ngesicwangciso esisebenzayo sokuthengisa ividiyo ebukhoma. Abaphulaphuli abaninzi ngoku bachitha iiyure imihla ngemihla kwi-Facebook Live, Periscope, Instagram Live, kunye ne-YouTube Live. Oko kuthetha ukuba iimveliso zilahlekile kwiimali ezingalinganiyo zengqalelo kunye nokubandakanyeka ngaphandle kwendlela yokuqinisekisa ukuba yimpumelelo
Ukusakaza okukukhokelela kukuvumela ukuba uthabathe ingqondo ngokukhawuleza kwaye ube ngumkhokeli wecandelo kwi-niche yakho yemarike. Kwaye awudingi utyalo-mali kwizinto zokusebenza kunye nesofthiwe.
Ii-video ezipholileyo, iingcali zizondla izixhobo ezixabisekileyo, kodwa zihlala imilambo ngokwemvelo yinto eluhlaza, engabandakanyiyo ithatha ukuba yenze ngaphezuluIntsebenziswano yangempelaBakho nabaphulaphuli. Ukudala umxholo okhoyo ngoku kuncinci (akukho mfuneko yekhamera ebiza okanye i-suite-notch video editing suite). Hlaba ezo ndleko ekuveliseni indleko kwimephu kwibali eliphosakeleyo.
Enye ifomula elula ukuba uqalise ukuphatha ukusasaza kwakho okuphilayo njengokwenza uphando lwetyala. Yabelana nje ngemeko egxininisa inqaku elibuhlungu wena okanye abathengi bakho abaye bahlangabezana nalo, ukwandisa umngeni wobuchule obangelwa ngulo mzekelo, kwaye ujikeleze kunye nokokufundiweyo endleleni. Ukubonelela ngolwazi oluninzi kubo bobabini abazayokwayeAbathengi abakhona ngexesha lokuhamba kwamanzi. Okanye ubonisa ingcali yoshishino okanye umthengi okhoyo okwazi ukwabelana ngolwazi lwabo nabaphulaphuli bakho.
Ezinye iifom ezisebenza kakuhle kwimifudlana ephilayo zizodwa, emva kweemidlalo zifikelela kwiimeko kunye neeseshoni ze-Q & A phakathi kwemikhosi kunye neendwendwe. Ukusasaza okuphilayo kusebenza kakuhle ukuzisa umlingo wesiganeko okanye imbonakaliso kwi-home view, efanaINtengiso yeSizwe. Inqaku eliphantsi kukuba, ukuba wenza abaphulaphuli bakho bazive bekhethekileyo, baya kukuvuza.
Emva kokuba ugqibelele ibali, qalisa ukuhlela ukusasaza kwakho okuphilayo. Ukuze uqalise, ikhamera yefowuni okanye i-laptop yekhamera ye-laptop iphelele. Unokufuna ukutshala imali kwi-tripod ukuzinzisa imifanekiso yakho.
Ukudala umxholo kungumlinganiselo omnye we-puzzle. Umngeni sele uqinisekisa ukuba ufunyanwa ngabaphulaphuli bakho. Yona yindlela kuphela yokuphucula impumelelo. Uninzi lweziqonga zentlalo ngoku zinokuzikhethela zamahhala zokusasaza ukusasaza kwakho okuphilayo kwihlabathi. Oku kuhle, kodwa kufuneka ugxininise ekusasazeni kuzo zonke iziteshi apho abaphulaphuli bakho basebenzisa umxholo. Oku kungadinga ukusebenzisa i-tripod enye ukwenzela ukuba usasaze kwiiplatifomu ezihlukeneyo njenge-Facebook Live kunye ne-YouTube Live ngexesha elifanayo.
Indlela elula yokuqinisekisa ukuba ufihla zonke iinjongo kukuqwalasela ukusabalaliswa kwezinto eziphilayo kunye nokuhlawula:
Ukufumana ababukeli ukuba bahlalutye ngokusemgangathweni ngokumalunga nokukhuthazwa kwakho. Ukuphucula izithuba zokulalela ezikhoyo kwi-arsenal yakho. Oku kungabandakanya i-media media, i-imeyili kunye newebhusayithi yakho.
Ukwabelana ngokuqulathe umxholo njengokukhuthazwa kwangaphambili, izaziso, kunye nephepha lokubhalisa elifana nelo webinar. Ngaphambi kokusasaza okubukhoma, khuthaza kuzo zonke iziteshi zakho. Thumela kwiziteshi zakho zentlalo, thumela i-imeyile ngosuku ngaphambi kokusasaza okubukhoma, kwaye uthumele 'Ukuhamba kwii-15 imizuzu!' Hlaziya kwi-Twitter. Emva kokuba isiganeko siphila, qhubeka usasaza igama. Thumela i-"Live Now" isikhumbuzo kwiziteshi zoluntu apho uhlala khona. Yabelana ngesaziso ekufanelekileyoIzithuthi zikawonkewonke zikaSlack. Ezi ntengiso zi "ziqhamo eziphantsi." Bazinomdla kwizihloko ezifanayo, ke qiniseka ukuba ubamba ingqalelo yabo.
Ngexesha elithile, uza kufinyelela ekupheleni kwendawo yamanzi yokujonga indawo. Ngoku, lixesha lokukhulisa abaphulaphuli bakho ngokuqhubeka nokuphucula ukubonakala kunye nokukhuthazwa okuhlawuliweyo ngokuUhlala kwividiyo yesikhulumiBathandaAmpLive. Ukuhamba uphila umdlalo, ngoko kutheni ungaqinisekisi ukuba uphumelele?
Cinga ukukhuthazwa okuhlawulwayo kwividiyo ekholayo kufana namanye amaphepha ehlawulwayo, kodwa qinisekisa ukuba umthengisi wakho unenethiwekhi yonikezelo lwexesha langempela. Qinisekisa ukuba bangajolisa abaphulaphuli abathile ngexesha langempela xa ukusasazwa kwakho kuphila ngokuzisa okanye ukukhonza umxholo kubantu abaye babonisa umdla ngomxholo. Kwakhona, qi ni sekise ukuba banokukunika ngamatriki amanani kunye nokuqonda kubakhokeli bakho. Oku kuqinisekisa ukuba uphumelele ukuphumelela ukuze ulandele kwaye uqhubeke nencoko nababukeli bakho emva kokuba isiganeko siphelile.
uthethathethwanoYindlela ebalulekileyo yokuqinisekisa ukuba yimpumelelo enkulu yokusasazwa kwakho. Qinisekisa ukuba i-platform yakho yevidiyo ebonakalayo ineempawu ezikhuthaza ukuba abathathi-nxaxheba bathathe inxaxheba. Fumana ababukeli ukuba bangene, babuze imibuzo, babelane ngeengcamango zabo, kwaye bajonge kwiindlela ezilungileyo ngexesha lokusasazwa ngokusasazwayo. Umsebenzi we-Periscope wengxoxo ulungile kubabukeli ukubuza imibuzo ngexesha langempela.
Ungazihoxisi ukukhuthaza abantu ukuba bathathe inxaxheba kunye namabhaso kunye neemvavanyo zamahhala. URoblox, iqonga lokudlala le-online,Wanika amaxabisoKwimigudu yabo yokuphila imihla ngemihla ngeveki ukubhiyozela ukuya kubafundi be-150,000 Twitch. Kakade, akudingeki ukuba unikele abaphulaphuli bakho ukuba bakhuthaze. Khawukhumbule ukuba udibaniso lendlela yesibini, kwaye ufuna ukuba abathathi-nxaxheba bathathe isigqiba.
Idatha ibalulekile ekuncediseni ukuqhubela phambili ukuphumelela impumelelo ngokuqikelela oko kusebenzayo noko kungenjalo. Ukuhlalutya impembelelo yakho kwenza izigqibo ezingcono malunga nesicwangciso sakho sevidiyo esiphila phambili.
Uninzi lweziqendu zentlalo zinika amathrikhi amancinci njengemibono, izabelo kunye namazwana. Ezi zinto zinjengeendlela zokuqala zevidiyo yakho. Nangona kunjalo, le methrikhi ayibonakali ukuba ngubani osebenzayo nevidiyo yakho ephilayo. Dive ejulile ukuqonda abaphulaphuli bakho kwaye ubonise ukuqonda okubalulekileyo. Ii-Platform ezifana ne-AmpLive makabeke i-cookie kumbukeli ngamnye kwaye ulandelele umzuzu ochanekileyo umntu owenzayo ngokusasazwa ngokubukhoma. Emva koko, mkhwelise loo mntu ehamba phambili ekuhambeni komthengi wabo kwezinye iikhankaso kunye neziteshi.
Ukuguquka okanye Impumelelo yeNjongo
Ukufumana ukusasazwa kwevidiyo kwi-ROI yinkqubo: ukubandakanya, ukusabalalisa, ukuguqula, nokuvala. Qinisekisa ukuba abaphulaphuli bakho bathatha inxaxheba kwezobuhlanga. Emva koko, papasha umlambo nge-intanethi yokuhambisa kwiwebhu. Umjelo ngamnye uya kufakwa kwiyunithi yesikhangiso kunye necookie esilandela ixesha lokujonga, ukubandakanya, ukuguqulwa, njl. Emva koko, landela umlinganiselo wokungqakraza, ukuguqulwa, kunye namanye amathrikhi ukuzisa indlela olandela ngayo.
Umzekelo, umbukeli ochitha imizuzwana ye-30 kunye nomxholo wakho unokulungele kuphela ukunikezelwa okulandelelanayo (umz Omnye obona umgca wakho wokuphila kwimigqa ye-30 unokulungele ukubhalisa kwisilingo samahhala. Basenokufuna ukubhalisa kwisiganeko esizayo okanye ukubandakanya isiqulatho somxholo. Cinga ngamavidiyo aphilayo ngendlela efanayo nakwezinye iinkqubo zokuthengisa. Injongo yakho kufuneka ukuba uqhube umqhubi ofanelekileyo okhokelela ekutheni ukondle kwimikhankaso yakho yokukhulisa. Emva koko, unako ukulandelela umbonisi ngamnye ukuya kutshintsho ukuze uqinisekise ukuba uphumelele.
Nangona ividyo ephilayo ikhuni kwaye ingabandakanywa, idinga isicwangciso sayo ukuba isebenze. Isinyathelo ngasinye siqhuba impumelelo yomnye. Ukufikelela kubaphulaphuli abalungileyo kunye nokubonisa i-ROI enhle yinjongo enkulu. Kodwa ukuqonda indlela yokulawula ukuhamba komsebenzi kukubalulekileyo ukuphila kwendalo.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Injini yeVidiyo	2017-05-23
Previous: I-FUJIFILM / I-FUJINON yokuHlasela Igumbi lokuLungisa iLensi kunye neMos Demos ezintsha kwi-Cine gear Gear Expo
next: Ividiyo ye-IP yangaphandle idala amava e-stadium e-TG 1899 Hoffenheim
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "Iiplani eziphezulu ze-5 zokuphumelela ngokuphumelelayo: Ukuphumelela ekudalweni kwintengiso". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/5-top-strategies-for-livestreaming-success-winning-from-creation-to-distribution/. Enkosi.